ရုံး | November 2019
အလုပ်လုပ်အချိန် metering 10 software ကို
စနစ်တကျအသုံးပြုခဲ့သည့်အခါလုပ်ငန်းအသွားအလာပိုကောင်းအောင်, အကောင့်သို့အလုပ်ချိန်ယူပြီး Program ကိုကူညီပေးသည်။ ယနေ့ developer များ, ပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အသီးအသီးအထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏တိကျသောအခြေအနေများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အဆင်ပြေအောင်, အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်အပြင်, ပတျသကျနှင့်လည်းအပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနေကြသည်။
3D စာသားနဲ့တံဆိပ်များအတွက်2"ရွှေ" အစီအစဉ်ကို
မင်္ဂလာပါ မကြာသေးမီကလူကြိုက်များဒါခေါ် 3D စာသားကိုရရှိမှု: သူကြီးအကြည့်နှင့် (ကဝယ်လိုအားကြောင့်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး) အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲယူ။ ထိုကဲ့သို့သောစာသားဖန်တီးရန်က "ကြီးမားတဲ့" အယ်ဒီတာများ (ဥပမာ, ကို Photoshop), သို့မဟုတ်မည်သည့်အထူးမဆိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်စေလိုအပ်ပေသည်။ အစီအစဉ် (ဒီနေရာမှာသူတို့ကကျွန်မဒီဆောင်းပါးထဲမှာနေဖို့လိုခငျြ -So) ။
စမ်းသပ်က HTML, EXE, Flash ကို formats (စမ်းသပ်မှု PC များနှင့်အင်တာနက်ဆိုက်များ) ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို။ ညွှန်ကြားချက်များ။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ငါနီးပါးလူတိုင်းစာမေးပွဲများစွာကိုစမ်းသပ်ခြင်း၏ပုံစံထွက်သယ်ဆောင်လာသောအခါတှငျအနညျးဆုံးဘဝမှာအကြိမ်အနည်းငယ်, အထူးသဖြင့်ယခုအမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပြီး, ပြီးတော့မှတ်၏ရာခိုင်နှုန်းကိုပြသထင်ပါတယ်။ သင်တို့မူကားတစ်ဦးစမ်းသပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့လျှင်? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ် website ကိုရှိသည်နှင့်သင်စာဖတ်သူတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့လိုပါသနည်း
ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းဘာသာပြန်ဆိုရန်။ ဥပမာအားဖြင့်, အင်္ဂလိပ်ထံမှ Russian သို့
တော်တော်လေးဘုံလုပ်ငန်းတာဝန် - မကြာခဏပြုလုပ် Russian သို့အင်္ဂလိပ်စာသားကိုဘာသာပြန်ဆိုရန်လိုအပ်သောအခါလေ့လာမှုကာလအတွင်းထိုကဲ့သို့သောတာဝန်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြုံတွေ့တဘာသာစကားကနေ drugoy.Ochen မှစာသား၏ဤဘာသာပြန်ချက်။ သငျသညျဘာသာစကားမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမကအထူးဘာသာပြန်ချက်ဆော့ဖ်ဝဲ, အဘိဓါနျအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုမပွုနိုငျသညျ!
Android အတွက် Excel ကိုနဲ့ Word
မကြာသေးမီကက Android operating system ကိုအလွန်လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်, များစွာသောအသုံးပြုသူများအဖုန်းများ, တက်ဘလက်, ဂိမ်းစက်, စတာတွေရှိတယ် ဒါကြောင့်အဲဒီ devices တွေကို Excel ကိုနဲ့ Word ထဲမှာစာရွက်စာတမ်းများဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အရှိအန်းဒရွိုက် OS ကိုအထူးအစီအစဉ်များသည်ဤအနက်တစ်ခုပေါ်တွင်ဖြစ်ကြသည်နှင့်ဤဆောင်းပါး၌အကြောင်းပြောဆိုချင်ပါတယ် ... ကျနော်တို့ Go ရန်စာရွက်စာတမ်းများအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။
အွန်လိုင်းပုဒ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးလုပ်နည်း - အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်များ၏တစ်ရွေးချယ်ရေး
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားစာသားကို dial ရန်ရှိသည်။ မှန်ကန်စွာသင်နားလည်စေရန်, သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်၌နေရာချဖို့လိုအပ် (လက်ဝဲဘက်, လမ်းဖြင့်ပုံ၏ဥပမာတစ်ခု, နာမည်ကြီးကာတွန်းကနေ, ကအတော်လေးထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်: "စားဟင်းလျာများ, ဘလော့များ") ။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကော်မာကျမ်းစာ၌ရေးထား၏မြေတပြင်လုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်!
OCR ။ အခမဲ့ပရိုဂရမ် - အလားတူ FineReader
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းမကြာခဏရုံး applications များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူလူတိုင်းကိုတစ်ဘုံလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ကြသည် - စာအုပ်, မဂ္ဂဇင်း, သတင်းစာရုံအရွက်ကနေစာသားအား scan, ပြီးတော့ထိုကဲ့သို့သောစကားလုံးစာရွက်စာတမ်းအဖြစ် text format အစရှိသူများပုံရိပ်တွေဘာသာပြန်ဆိုရန်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်စကင်နာနှင့်စာသားအသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်အထူးအစီအစဉ်လိုအပ်သည်။
အားလုံးစာဖတ်သူများမှနှုတ်ခွန်းဆက်! အတော်လေးမကြာခဏကျနော် (ထိုကဲ့သို့သောကို Adobe Photoshop ကို, ACDSee ဒါဘွားအတော်လေးခက်ခဲနှင့်အချိန်တစ်ဦးထက်ပိုသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း "ပုံမှန်" အဆင့်တွင်လုပ်ကိုင်ဖို့သင်ယူဖို့စားသုံးထားတဲ့။ အယ်ဒီတာများ, ကဲ့သို့) မဆို software ကိုမသုံးဘဲလှပသောစာသားမရေးသားဖို့ကိုဘယ်လိုပြောပြရန်မေးသော်နေပါတယ်။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးငါကို Photoshop မှာအလွန်ကောင်းကိုမကျင့်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှသော program ကိုဖွင့်အင်္ဂါရပ်များထက်နည်း 1% ကိုငါသိ၏။
အဘယ်အရာကို Microsoft ကရုံး (Word, Excel ... ) ကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့ Analogues
တစ်ရက်ကောင်းတယ်။ ရုံးပလီကေးရှင်းတစ်ခုအထုပ်တပ်ဆင်ရန်နှင့် configure - - အရှိဆုံးကွန်ပျူတာပြီးနောက်သုံးစွဲသူများကသို့မဟုတ် Windows ဝယ်ယူ reinstall သောပထမဦးဆုံးအရာကဒီရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအမျှစသည်တို့ကိုသူတို့မရှိဘဲကြောင့်လူကြိုက်များကို formats :. Doc သို့မဆိုစာရွက်စာတမ်းဖွင့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသောကွောငျ့, docx, xlsx Microsoft က Office ကို software ကိုအထုပ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဘလော့ဂ်အပေါငျးတို့သစာဖတ်သူများမှနှုတ်ခွန်းဆက်! ငါကစာသားအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်, ငါမကြာခဏကွန်ပျူတာနောက်ကွယ်မှအလုပ်လုပ်သောသူတို့အား (မကစားပါဘူး, ထိုသို့အလုပ်လုပ်တယ်) ထိုထင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ဥပမာ, သင်စာအုပ်ကနေကောက်နုတ်ချက် scan ဖတ်ခြင်းနှင့်ယခုသင်သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းသို့ထည့်သွင်းရန်ဤအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် scan ဖတ်စာရွက်စာတမ်းပုံဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တစ်ဦးကစာသားလိုအပျသ - ကပင်ဓါတ်ပုံတွေထဲကနေစာသားကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အထူးဆော့ဗ်ဝဲနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်ပါတယ်။
Anti-plagiarism - ထူးခြားမှုစစ်ဆေးသည်အခမဲ့စာသားကို
နေ့သည်ကောင်းသော! ထိုကဲ့သို့သော rip-ပယ်သလော များသောအားဖြင့်ဒီအသုံးအနှုန်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများကိုလေးစားနေချိန်မှာမိမိအဖြစ်ကိုချွတ်ရှောက်သွားဖို့ကြိုးစားနေသောထူးခြားတဲ့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်, ရည်ညွှန်းတယ်။ Antiplagiat - ဒီအောက်မှာက၎င်း၏ထူးခြားမှုအပေါ်စာသားစစ်ဆေးနိုင်သည်ကိုမူထူးခြားတဲ့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်တိုက်ဖျက်ဖို့, ဝန်ဆောင်မှုများအမျိုးမျိုးကိုရည်ညွှန်းသည်။
Converters ppt နှင့် pptx ။ PDF ဖိုင်ရယူရန်ဖို့တင်ဆက်မှု၏ဘာသာပြန်စာပေ။
မင်္ဂလာပါ အများဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဦးကမျှမျှတတဘုံလုပ်ငန်းတာဝန် - ငါတို့သည် ppt နှင့် pptx ပုံစံများနှင့် ပတ်သက်. စကားပြောနေကြသည်ကိုဤအမှု၌, တယောက်ကိုတယောက်ပုံစံကနေဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကို formats တင်ပြချက်များအတွက် Microsoft ကပါဝါပွိုင့်လူကြိုက်များတဲ့အစီအစဉ်တွင်အသုံးပြုကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံသငျသညျထိုကဲ့သို့သော PDF ဖိုင်ရယူရန် (PDF ကိုဖွင့်လှစ်ဘို့အစီအစဉ်ကို) အဖြစ်, ppt pptx ပုံစံသို့မဟုတ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ပင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံချင်တယ်။
Microsoft ကဒီဇိုင်းရုံးအစီအစဉ်များကို updated ထားပါတယ်
ပိုများသောမကြာသေးမီကမကြာမီအလင်း Word, Excel, PowerPoint နှင့် Outlook သစ်ဗားရှင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Microsoft က Office ကိုဒီဇိုင်းအပ်ဒိတ်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အပြောင်းအလဲများအတိုင်းလိုက်နာပါ့မလားလိုက်တဲ့အခါ အပြောင်းအလဲတွေအသုံးပြုသူများအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်အခါအဖြစ်အစောပိုင်းယခုနှစ်ဇွန်လအဖြစ် Word, Excel နဲ့ PowerPoint ၏သစ်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကဲဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Scanning နှင့် OCR
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးချင်းစီကိုသငျသညျအီလက်ထရောနစ်ပုံစံသို့စက္ကူစာရွက်စာတမ်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်သည့်အခါပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကစတာတွေ, အီလက်ထရောနစ်အဘိဓါနျသုံးပြီးကျမ်းဘာသာပြန်ဆိုမကြာခဏစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သင်ယူသောသူတို့အဘို့လုပ်ဖို့လိုအပ် ဤဆောင်းပါး၌ငါလုပ်ငန်းစဉ်၏အခြေခံအချို့ကိုဝေမျှချင်ပါတယ်။
ABBYY FineReader သုံးပြီးစာသားကိုထဲသို့ image ကိုဘာသာပြန်ဆိုဘယ်လိုနေသလဲ?
ဤဆောင်းပါးသည် (https://pcpro100.info/skanirovanie-teksta/) ယခင်အပြင်ဖြစ်မည်, ပိုပြီးအသေးစိတ်တိုက်ရိုက် OCR ၏အနှစ်သာရကိုဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ အများအပြားအသုံးပြုသူများကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။ စာအုပ်, သတင်းစာ, မဂ္ဂဇင်း, etc စကင်ဖတ်ဖို့ပြီးနောက်သင်ကဓါတ်ပုံတွေကို (ဆိုလိုသည်မှာအစုတခုရ။
မင်္ဂလာပါ အကြောင်းနှစ်ပေါင်း 20 အကြာ, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၏လေ့လာမှုပင်တစ်ခုတည်းစကားလုံးရှာတွေ့ဖို့အချိန်တွေအများကြီးဖြုန်းတစ်စက္ကူအဘိဓါန်မှတဆင့်အရွက်ခဲ့! အခုတော့တစ်ဦးကျွမ်းတဝင်မရှိသောစကားလုံးသည်အဘယ်အရာထွက်ရှာတွေ့ - လုံလောက်တဲ့ 2-3 mouse ကိုကလစ်လုပ်, တစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်များအတွက်ဘာသာပြန်ချက်ရှာပါ။ နည်းပညာနေဆဲမခံမရပ်ပါဘူး!
အဆိုပါဖွင့်လှစ် PDF files တွေကို? အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ။
ယနေ့တွင်ကွန်ယက်, သူတို့ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် (ကပြောပြရန်မဟုတ်ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်တယ် "ကောင်းသော" သည်မည်မျှခန့်) အမြင်ဖို့ operating system ကို Windows 8 မှာ built-in အစီအစဉ်ကိုအပြင် PDF files တွေကိုကြည့်ရှုဘို့ကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များများစွာရှိပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါစဉ်းစားရန်လိုခငျြဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ထိုသူတို့ဖတ်ရှုဖို့အခမဲ့, တကယ်သင် PDF files တွေကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးအသုံးဝင်သောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ပုံထဲကထွက် zoom ကိုအလွယ်တကူလက်ျာစာမျက်နှာလှန်, ဒါကြောင့်ထွက်။
မှန်ကန်စွာတစ်ဦးတင်ပြချက်စေရန်မည်သို့: သိကောင်းစရာများ seasoned ...
မင်္ဂလာပါ အဘယ်ကြောင့် "seasoned အကြံဉာဏ်ကို" ပါသလဲ စေနှင့်တင်ပြနေတဲ့တင်ပြချက်နှင့် (:) သင်တန်း၏, မရိုးရှင်းနားထောင်သူအဖြစ်) သူတို့ကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဘယ်လို: ငါပဲနှစ်ခုအခန်းကဏ္ဍများတွင်ဖြစ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငါအရှိဆုံးသူတို့၏ '' နှင့်တူ / မနှစ်သက် '' သာအာရုံစူးစိုက်နေတဲ့တင်ဆက်မှုတက်ဆွဲယူကြောင်းချက်ချင်းပြောနိုင်ပါတယ်။
PDF ဖိုင် format နဲ့သင်၏စာသားကယ်ဖို့?
နေ့သည်ကောင်းသော! အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများ TXT အတွက်စာသားအများဆုံးမကြာခဏ, (DOCX) ကို DOC အတွက်၎င်း၏စာရွက်စာတမ်းများအများစုသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုအင်တာနက်၌သင်တို့၏စာရွက်စာတမ်းထုတ် တင်. ချင်လျှင်, PDF ကိုဥပမာ - တစ်ခါတစ်ရံသင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ PDF ကို format ကိုဖွင့်လှစ်ရန်လွယ်ကူနှင့် MacOS, နဲ့ Windows အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အသင်၏စာသားအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်သည့်, စာသားနှင့်ဂရပ်ဖစ်၏ပုံစံချပေးမဆုံးရှုံးပါဘူး။
နေ့သည်ကောင်းသော။ တောင်မှအများဆုံးအရည်အချင်းလူများစာသားထဲမှာအမှားများကိုအမြိုးမြိုးကနေအာမခံထားကြသည်မဟုတ်။ အလျင်, ရှုပ်ထွေးသောစာကြောင်းများဆောက်လုပ်အတွက်သတိမဲ့မှာအချက်အလက်များ၏ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရသောအခါအများဆုံးကိစ္စများတွင်အမှားများစသည်တို့ကို, ဖြစ်ပေါ် နိမ့်ဆုံးမှအမှားများကို၏နံပါတ်လျှော့ချဖို့ - ကဥပမာ Microsoft Word ကို (စာလုံးပေါင်းစစ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ၏တဦးတည်း), မည်သည့်အစီအစဉ်၏အားသာချက်ယူကောင်းလှ၏။
https://termotools.com my.termotools.com © ရုံး 2019